Messenger ရဲ့ဒီဇိုင်းကာလာအသစ်ကိုကြိုက်နှစ်သက်ကြရဲ့လား? – AsiaApps
Facebook ဟာ ၂၀၁၈ အစောပိုင်းလောက်ကတည်းကကြေညာခဲ့တဲ့ Messenger update အသစ်ကို ပြီးခဲ့တဲ့ ဇန်နဝါရီလ ၉ ရက်နေ့က သူ့ရဲ့ server-side ကနေ region အားလုံးကို update ပေးလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ server-side က update ပေးလိုက်တာဖြစ်တာကြောင့် Messenger ကို ကိုယ်တိုင် update သွားမလုပ်ဖြစ်ရင်တောင် အလိုလို update လုပ်ပြီးသားဖြစ်ပြီး ပြောင်းလဲသွားတဲ့ ဒီဇိုင်းအနေအထားကို ခံစားရမှာပါ။ Update ကအလိုအလျှောက်ရောက်ရှိလာမှာဖြစ်တဲ့အတွက် update မဖြစ်သေးတဲ့ user တွေအနေနဲ့ အနည်းငယ်စောင့်ဆိုင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Messenger update ဖြစ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ အပေါ်ပုံမှာပြထားတဲ့ User Interface (UI) ဒီဇိုင်းကိုစတင်ခံစားရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ မလိုအပ်တဲ့ Tab တွေကိုဖြုတ်ပေးထားတာ၊ နောက်ခံရောင်အဖြူကိုထင်းနေအောင်လုပ်ပေးထားပြီး စာသားတွေကို ပိုပြီး Bold လုပ်ပေးထားတာကိုတွေ့ရမှာပါ။ ဒီ UI ကစစသုံးချင်းဆို သူ့ရဲ့ထင်းနေအောင်လုပ်ထားတဲ့အရောင်တွေကြောင့် တော်တော်လေးကို တစ်မျိုးကြီးကိုခံစားရပါတယ်။ တမျိုးကြီးခံစားရပေမယ့် UI အသစ်ဒီဇိုင်းဟာအမြင်ဆန်းနေတဲ့အတွက် ကျွန်တော်ကတော့ နှစ်သက်မိပါတယ်။
မိတ်ဆွေရော ပြောင်းလဲသွားတဲ့ Messenger UI ဒီဇိုင်းအသစ်အပေါ်ဘယ်လိုမြင်လဲခင်ဗျ? ကြိုက်နှစ်သက်ကြရဲ့လား?
ပြီးတော့ Messenger ရဲ့နောက်ခံအရောင် အဖြူရောင်ကို အမည်းရောင်အဖြစ် ပြောင်းလဲပေးမယ့် Dark mode update လည်း မကြာခင်မှာ region တိုင်းကို ရောက်ရှိလာဉီးကိုသိရပါတယ်။ အဲ့ဒါကို ကျွန်တော်နဲ့အတူတူစောင့်ကြတာပေါ့ခင်ဗျာ။ 😁)